विपन्न परिवारका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ : कांग्रेसका नेता शेर्पा – Himal FM 90.2 MHz
विपन्न परिवारका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ : कांग्रेसका नेता शेर्पा
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसंगै सरकारले लक डाउन गरेको छ । यो समयमा अति विपन्न परिवार मारमा परेका छन् । यो संगै दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्नेका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने विषय सतहमा आएको छ । यहि विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता आङगेलु शेर्पासंग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
कोरोना रोकथामका लागि सरकारको तयारी चित्त बुझ्दो छ ?
यो कोरोना भाइयरसको जुन किसिमले जोखिम बढेको छ । सरकारको एक खालको तयार छ तर जुन तयारी हु्नु पथ्र्यो, त्यो तयारी भएको देखिदैन ।
तपाईको विचारमा तयारी कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
नेपालमा कारोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि संक्रमित व्यक्तिसंग आउने व्यक्तिहरुलाई खोजीखोजी क्वारेनटाइनमा राख्नुपथ्र्यो, त्यसो गरिएन् । सरकारले सिमानाका हुदै र हवाई यात्राबाट नेपाल फर्केकाहरुलाई जुन हिसावले परीक्षण गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएन । अर्को कुरा, सरकारले जोखिम न्यूनिकरणका लागि लक डाउन गरेर घरै बस्न भनियो तर ज्यालादारीमा कमाएर खाने परिवारमा के वितिरहेको होला । त्यस्ता परिवारको बारेमा राज्यले सोच्नुपर्छ ।
गरिब, सुकुम्बासी, ज्यालादारी लक्षित राहतको प्याकेज तुरुन्त ल्याउनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रो देशमा पनि दिनभरी काम गरेर बेलुका हातमुख जोड्ने मानिसहरु धेरै छन् । त्यस्ता समुदाय शहरमा पनि छन् र गाउँमा पनि छन् । त्यसरी दिनभरी काम गरेर खाने मानिसलाई सरकारले जर्वजस्ती क्वारेन्टाएनमा राख्दा खेरी रोगबाट मर्ने भन्दा भोकमरीबाट मर्ने खतरा बढ्छ ।